M-Media Knowledge Archives - Page4of7- News @ M-Media
ငါးရှဉ့်တို့၏ အံ့ဖွယ် ဗီဇသိစိတ်စွမ်းရည်
ဇူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၁၆ အေးထွန်း ရှာဖွေတင်ဆက်သည်။ ဥရောပငါးရှဉ့်မတွေနဲ့ မြောက်အမေရိကငါးရှဉ့်မတွေဟာ သူတို့ဥဥတော့မယ်ဆိုရင် သူတို့ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်တဲ့ ရေချိုမြစ်တွေကို စွန့်ပြီး အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာနဲ့ ထိဆက်နေတဲ့ Sargasso ပင်လယ်ဆီကို ခရီးနှင်ဖို့ တောင်ဘက်ကိုကူးသွားကြတယ်။ အဲဒီပင်လယ်က[Read More…]
July 26, 2016 — M-Media Knowledge
Jumping Spider ပင့်ကူတို့၏ စွမ်းရည် နှင့် ပရိယာယ်
ဇွန် ၉ ၊ ၂၀၁၆ အေးထွန်း ရှာဖွေတင်ဆက်သည်။ . အပင်အမြင့်တွေပေါ်မှာ နေထိုင်လေ့ရှိတဲ့ Jumping Spider ပင့်ကူတွေဟာ အခြားပင့်ကူတွေလို ပင့်ကူမျှင်အိမ် ဆောက်ပြီး လာရောက်ကပ်တွယ်တဲ့ သားကောင်ကို ဖမ်းစားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ .[Read More…]
June 9, 2016 — M-Media Knowledge
မေ၊ ၁၈ ၊ ၂၀၁၆ M-Media အေးထွန်း ရှာဖွေတင်ဆက်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မဝင်နိုင်တဲ့ သစ်ခေါင်းပေါက်ငယ်လေးထဲက ပိုးကောင်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုဖမ်းမလဲဗျ ။ အင်း၊ အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ချိတ်ရှည်တစ်ချောင်းနဲ့ ကလော်ထုတ်ရမှာပေါ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ New Caledonian[Read More…]
May 18, 2016 — M-Media Knowledge
Sea Cucumber တစ်ကောင်၏ ရန်ရှောင်နည်း
ဧပြီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၆ M-Media အေးထွန်း ရှာဖွေတင်ဆက်သည်။ ရန်သူတွေ လာနေတာ ကျွန်တော် ထောက်လှမ်းသိရှိလိုက်တယ်။ သူတို့တွေ ကျွန်တော့ကို ရန်မရှာသေးဘူး ၊ ပုန်းဖို့ ဘေးမှာ အပေါက်ငယ်လေးတစ်ခုပဲ ရှိတာ စမ်းသပ်မိတယ်။[Read More…]
April 20, 2016 — M-Media Knowledge
Large Blue ခူကောင်တို့၏ မာယာ
ဧပြီ ၁၃ ၊ ၂၀၁၆ M-Media အေးထွန်း ရှာဖွေတင်ဆက်သည်။ အင်္ဂလန်က Large Blue Butterfly ( Maculinea arion) လိပ်ပြာမတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဥတွေကို စမုံဖြူပင် (Thyme Plant)[Read More…]
April 13, 2016 — M-Media Knowledge